Vokatry ny tsy fahaiza-mitantana sy ny kolikoly : “Tsy foana ny trafika andramena”, hoy ny ONG Traffic | NewsMada
Vokatry ny tsy fahaiza-mitantana sy ny kolikoly : “Tsy foana ny trafika andramena”, hoy ny ONG Traffic
Nahatratra 150.000 t ny bolabolna andramena naondrana an-tsokosoko tany ivelany teo anelanelan’ny taona 2010-2015. Araka ny fanadihadiana nataon’ny ONG Traffic, “tsy mety foana ny trafika vokatry ny tsy fahaiza-mitantan’ny mpitondra sy ny kolikoly”.
Namoaka ny valin’ny fanadihadiana ny fikambanana misehatra amin’ny tontolo iainana, ny ONG Traffic, ao anatin’ilay fandaharanasa Scapes, vatsin’ny USAID ara-bola, miaraka amin’ny WWF, ny Wildelife Conservation Society, ny Conservation international, ary miombon’antoka amin’ny fikambanana fiarahamonina sy ny governemanta.
Araka ny nivoaka tao anatin’ny fanadihadiana “l’Ile au bois: le commerce de bois de roses et d’ébène de Madagascar”, “nahatratra 350.000 ny hazo nokapaina tsy ara-dalàna, indrindra ny andramena tany anaty Faritra arovana (AP), ary nihoatra ny 150.000 t ny bolabola naondrana an-tsokosoko tany Sina, Malezia, Maorisy tao anatin’ny dimy taona (marsa 2010-marsa 2015)”.
Nambaran’i Roland Melisch, tompon’andraikitra ao amin’ny ONG Traffic, fa “ vokatry ny tsy fahaiza-mitantana sy ny kolikoly, nikorontana tanteraka ny zava-misy, tsy misy ny fanaraha-maso ny fitantanana sy ny fanangonana ny andramena, nitarika ny olon-drehetra nandripaka ny hazo tanaty Faritra arovana. Mila taona maro anefa vao hiverina ny hamaitson’ny voahary”.
Navoakan’ny fanadihadiana fa aman-jatony ny karazana hazo andramena “Diospyros” sy ny volombodimpoina (ébène) “Dalbergia” eto Madagasikara. Tian’ny mpanjifa any Azia tokoa ireo hazo ireo, noho ny hatsarany sady mafy sy maharitra, azo anaovana fanaka sy kojakoja tena raitra sy lafo vidy.